:Bọchị: February 6, 2020
Iszọ nke abụọ, nke malitere ka e wuru ya na Sabiha Gökçen Airport na 2015, na-eme atụmatụ itinye ya n'ọrụ n'ọgwụgwụ afọ 2020. 3 puku 500 wuru yiri nke dị n'okporo ụzọ awara awara dị na Sabiha Gökçen International Airport, ọdụ ụgbọ elu obodo nke Istanbul [More ...]
Ndị otu Izmir Chamber of Commerce, Aegean Region Chamber of Industry na Izmir Commodity Exchange natara onyinye ha na emume a mere na Balçova Kaya Thermal Hotel. N'ime ndị meriri na nturu ugo, İZBETON A.Ş. [More ...]
Ejirila ndị ode ụlọ ọrụ na ndị ụlọ elu na Başkent
Ankara Obodo Ankara, ngụkọta nke ndị na-agafe agafe na oke na-eje ozi ebe isi ihe na-agafe agafe bụ isi obodo niile mana ada ada site na amaghị ama, emebi ụma na arụpụta ihe. [More ...]
Pendik Metro Construction, Dent, 1 Oke 4 merụrụ ahụ
N'ime arụmọrụ nke metro dị n'ọdụ ụgbọ elu Sabiha Gökçen na Pendik, ezé mere n'enweghị ihe kpatara ya. N'oge ihe a mere, arịlịka ndị na-ebu ọrụ kreyọn dakwasịrị ndị ọrụ ahụ. N'ime arụpụta ọwara na Pendik Yayalar Mahallesi nke ụzọ ụgbọ oloko, amabeghị [More ...]
Courtlọ ikpe nchịkwa nke abụọ nke Sakarya kpebiri ịkwụsị ogbugbu nke usoro a n'ihi na a jụrụ arịrịọ maka nzigide iwu na Sapanca maka iwu akwadoghị mpaghara ebe a ga-ewuru okporo ụzọ ahụ. Sakarya Obodo nke ukwu isi oru ngo a [More ...]
Özcan Spoke banyere Line Speed ​​Train Line Passing Bolu
Emere nzukọ nke mbụ na Mgbakọ Mgbakọ nke obodo Bolu nke Febụwarị n'ime ụlọ Mgbakọ nke Obodo n'okpuru oche nke Bolu Municipality Tanju Özcan. Bolu City Council February 1st Nnọkọ na-ebi ndụ na-emegharị mmegharị na nzukọ ahụ [More ...]
RayHaber Ozi Ntanye 06.02.2020
Ntinye 25 KV Katenary Facility (TÜVASAŞ)
N'Itali, ihe dịkarịa ala mmadụ abụọ nwụrụ ma mmadụ 2 merụrụ ahụ n'ihi oke ọgbụgba ụgbọ elu. Traingbọ oloko dị elu si Milan, totali ruo Salerno, Livraga Station nke Lodi mpaghara [More ...]
IMM onyeisi oche Ekrem İmamoğlu ụmụ amaala merụrụ ahụ a ụgbọelu okuku na kwara Turkey, ọ gara ụlọ ọgwụ na-emeso na Kartal Pendik. Mamoğlu na-eso ndị merụrụ ahụ na-akparịta ụka, ọ sịrị, “Bilie ngwa ngwa” nye ndị ahụ metụtara na ndị ikwu ha. [More ...]
Ọdụ ụgbọ elu Sabiha Gökçen apụtaghị Runway! 3 Nwụrụ Anwụ 180 merụrụ ahụ
Ekwuputara na ụgbọ elu nke Pegasus Airlines, nke mere njem Izmir-Istanbul na-achọ ịbanye n'ọdụ ụgbọ elu Sabiha Gökçen, hapụrụ ọdụ ụgbọ elu. A kọrọ na emechiri ọdụ ụgbọ elu a nwa oge maka ihe mberede ahụ. Minista ahụike Fahrettin Koca mmadụ 180 na ngụkọta [More ...]